Mamorona hetsika ao amin'ny Photoshop mba hitsitsiana fotoana amin'ny dingan'ny fanovana | Famoronana an-tserasera
Cfihetsika ambadika ao Photoshop mamonjy ny fotoana amin'ny fizotry ny fanovana dia hevitra tena tsara rehefa manana sary mitovy aminy isika ary maniry izanyampiharo aminy ny fomba fanovana Photoshop. Mamela antsika hanao zavatra mamorona vokatra manokana ary apetaho amin'ny sary ireo vokany ireo ho azy. afaka to download asa amin'ny Internet na amin'ny fomba tsotra mamorona ny asantsika manokana ho an'ny fanontana amin'ny ho avy.
Raha reraka ianao mamerina ny fanovana amin'ny sarinao hatrany hatrany, dia manoro hevitra anao aho mba hampiasa ny fihetsika Photoshop for zà ny fotoana ary atsaharo ny mankaleo amin'ny famerimberenana hatrany io olana io ihany. Afaka mahita sary isika fa aorian'ny fampiharana hetsika dia tsy mijanona araka ny nitiavantsika azy satria mety tsy hitovy ny hazavana, ny aloka, ny loko ... sns, raha sendra hetsika io dia tsy ho olana izany satria Photoshop mamela antsika raha vao ampiharina ny hetsika, manodinkodina safidy retouch.
Ny zavatra voalohany tokony hataontsika mamorona hetsika amin'ny fanokafana ny menio hetsika ao amin'ny Photoshop, Amin'ny tranga miafina dia azontsika esorina amin'ny menio / fikandrana / hetsika izany.
Manokatra ny menio hetsika izahay ary mamorona hetsika amin'ny alàlan'ny fanerena ny safidy hetsika vaovao.
Raha vantany vao noforonina ny hetsika, ny zavatra manaraka tokony hataontsika dia ny manome ny safidy manomboka firaketana (hetsika hetsika) nanomboka tamin'ity fotoana ity rehetra dingana hijanona izay ataontsika voasoratra anarana tamin'ny hetsika nataontsika. Azontsika atao ny mampihatra ny fiolahana, ny fiovan'ny loko, ny haavon'ny ... ny famerenana amin'ny laoniny rehetra ny saripika.
Amin'ny sary eto ambany dia hitantsika ny fomba namoronana ny hetsika isaky ny fanovana natao tamin'ny sary ary mety hanafina ny sasany amin'ireo fizotrany ireo aza.
Mba hamaranana dia mila ajanona fotsiny ny peo/ajanony ny fandraisam-peon (hetsika menio) rehefa nijanona ny hetsika, afaka mamonjy ny sarintsika isika.
Para ampiharo ny hetsika vaovao nataonay amin'ny sary amin'ny ho avy dia mila manokatra ny sary fotsiny isika Photoshop ary atombohy ny hetsika amin'ny alàlan'ny fanerena ny safidy hanatanterahana ny safidinao (menio hetsika).
Miaraka amin'ireo fihetsika dia hitahiry fotoana ianao amin'ireo sary izay manana famerenana mitovy, miantoka fa tsy miverimberina ny fizotry ny fanovana. Azonao atao ihany koa ny mitahiry fanovana manokana ary aza hadino ireo dingana narahinao ho an'io karazana fanovana io. Ny fampidinana sy fampiasana hetsika dia mihatra amin'ny fomba hitantsika tamin'ny ampahany farany amin'ny lahatsoratra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Tutorials » Mamorona hetsika ao amin'ny Photoshop mba hitsitsiana fotoana
Inona no atao hoe Storytelling ary ahoana ny fomba hamelomana azy amin'ny fiainana amin'ny Infografika
Mampiasa plugins hampiasaina amin'ny Photoshop